HBO, Showtime uye Starz yaizove iyo kumusoro sleeve yaApple yekushambadzira kwayo sevhisi | IPhone nhau
Musi waKurume 25 chichava chiitiko cheApple, chiri chepamutemo, uye ichatitaridza sevhisi yekushambadzira vhidhiyo sevhisi, pamwe nekunyoreswa kweiyo Nhau app, uye ndiani anoziva kana Hardware nyowani nezvimwe zvinoshamisa. Asi Chii chiri kugadzira tarisiro yakanyanya kupokana kupinda kwaApple munyika yekutenderera mafirimu uye nhevedzano.
NeNetflix, HBO, Amazon Prime Vhidhiyo uye mamwe akawanda masevhisi atovepo kutenderera pasirese, pane kusahadzika kwakawanda nezvekubudirira kweiyi Apple sevhisi. Asi zvinoita sekunge kambani iyi ine ace kumusoro kwayo ruoko, kana kuti, akati wandei, kuitira kuti zvaro zvemukati hazvisi izvo chete zvinokwezva: inogona kusanganisira zvemukati kubva kuHBO, Showtime uye Starz.
Sezvangotaurwa Bloomberg, iyo kambani inenge ichipedzisa zvibvumirano nemasevhisi aya atova neruzivo rwakakura mukati mekambani, uye mune yayo katarogu inosanganisira kubudirira kwenyika senge Mutambo weZigaro, Westworld, Huru Diki Manyepo, Homeland, Shameless uye American Gods. Sekureva sosi imwecheteyo, nguva yakatarwa yakatemwa neChishanu ichi kupedzisa zvibvumirano, uye Apple ichave ichida kuita mvumo yekuwana masiginecha. Izvi zvirimo zvaizoperekedza zvakateedzana uye mafirimu ekugadzirwa kwayo ayo Apple atove kutoenderera, asi kuti vashoma chete vakagadzirira kutepfenyurwa munguva pfupi.
Pamusoro peiyi yekushambadzira vhidhiyo sevhisi, kunyoreswa kumapepanhau nemagazini kuchazotangawo pachiitiko ichi. Pamwechete, pfungwa yacho ndeyekuti iwo masevhisi akapatsanurwa, kunyangwe Apple yaigona kupa "package" nezvidimbu kune avo vanonyorera kune ese ari maviri. Chinhu chakambotaurwa nezvacho mumavhiki apfuura inogona kuoneka padanho: Apple kiredhiti kadhi. Sekureva kwaBloombergg, vatapi venhau vanoverengeka vanobva mubazi rezvemari vakakokwa pachiitiko ichi, chiratidzo chekuti sevhisi nyowani iyi inogonawo kuziviswa panguva yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » HBO, Showtime uye Starz yaizove Apple's ace kumusoro kwesleeve yekushambadzira kwayo sevhisi
Tidal ikozvino inoita kuti iwe ubudise Master yayo mhando pane iPhone